minokekar, Author at MPPG
Home / minokekar
Root & MM Font Done Easy on J700H V6.0.1 By Min_Oaker
minokekar January 8, 2017	Uncategorised
J7 တွေအတွက် Version 6.0.1 မှာ အလွယ်တစ်ကူ Root လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်လေးတွေ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်. အရင်ဆုံး ဖုန်းကို USB Debugging On ပေးပါ နောက်တစ်ခုက Oem Unlock လည်း on ထားပေးပါ ပြီးရင် ကျနော်ပေးထားတဲ့ Root & MMFOnt ဖိုင်လေး ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ Password=Min_Oaker နဲ့ zip ဖြည်လိုက်ပြီး အထဲမှာပါတဲ့ SuperSU ဖိုင်လေးကို SD Card ထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါ .ပြီးရင် ဖုန်းကို Downloading Mode ခေါ်လိုက်ပါ. Odin ကို ဖွင့်လိုက်ပါ အထဲက PDA or AP နေရာကနေ ကျနော့် ဖိုင်ထဲက …
Samsung SM-G361H FRP Remove Easy Method By Min_Oaker
minokekar January 6, 2017	Uncategorised
Samusng SM-G361H အတွက် Combination File လေးပါ FRP ကျနေတာ တွေအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် နည်းလမ်းလေးပါ. ဒီ File ကို ပဲ ဒေါင်းပြီး Odin ကနေ တင်လိုက်ပါ Download SM-G361H Combination Firmware – 207 MB (Pass=MinOaker) https://www.mediafire.com/?2kwg10p4m0am2m2 Lock ပြုတ်သွားပါလိမ့်မယ်. ပီးသွားရင် တော့ Combination က user သုံးလို့ အဆင်မပြေပါဘူး ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ ဒီ Firmware လေး ပြန်တင်လိုက်ပါမယ် THL Region နဲ့ ပါ ကိုယ့်မှာ ရှိတယ်ဆို မဒေါင်းပါနဲ့ အနည်းဆုံး 5.1.1 ဖြစ်ရပါမယ် 5.1 အောက်ဆို logo လည် or …
GSM ALLADIN BOX Crack Portable V2 1.40 By Min Oaker
minokekar December 12, 2016	Uncategorised
GSM ALLADIN BOX ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် V2 1.40 အတွက် Crack လေးပါ. အသုံးပြုရ အဆင်ပြေအောင် Portable လေး လုပ်ထားပေးပါတယ်. zip ကို ဖြည်ချပြီး Loader ကို Run as Admin လေး နဲ့ Run ပေးလိုက်ယုံပါပဲ. ဘယ် C တို့ Program တို့မှ သွားထည့်နေစရာ မလိုပါဘူး. Download GSM ALLADIN BOX Crack V2 1.40 – 77 MB http://www.mediafire.com/file/95k7a99b3j2ar7x/GSM_ALADDIN_V2_Portable(RarPass%3Dminoaker).rar Passs – minoaker Credit >>> Younas . အဆင်ပြေပါစေ. www.minoaker.net mobile …
minokekar November 28, 2016	Uncategorised
ကဲ စောင့်မျှော်နေတယ်ဟုတ်. လာပီလေ Miracle box ရဲ့ နောက်ဆုံး Version အတွက် Crack (Box မလိုပဲ သုံးနိုင်တော့မယ်ပြောတာ) အမြန်လေး သာ ဒေါင်းထားလိုက်ကြပေတော့.း Download Steup >> 298 MB Mediafire Link Downlload Loader >>> 2.5 MB Drive.Google Link . Rar Pass = minoaker . အချိန်မအားလို့ သင်တန်းလာရောက် မတက်နိုင်တဲ့သူများအတွက် အိမ်ကနေပြီး အင်တာနက်လေး ရှိယုံနဲ့ လေ့လာနိုင်မယ့် 2016 Error Solution Mobile Software Advance Online Training Group လေးပါ http://www.minoaker.net/2016/11/online-mobile-software-advance-service.html
Clash Of Clan Update on 12.10.2016 (apk) By Min Oaker
minokekar October 13, 2016	Uncategorised
12.10.2016 ရက်နေ့ကမှ Update ပေးလာတဲ့ Clash Of Clans apk လေးပါ. အောက်က လင့် ၂ ခုမှ နှစ်သက်ရာ လင့်ကနေ Download ဆွဲပီး ရယူနိုင်ပါပီ Bomb Tower လေးကတော့ New Defender အနေနဲ့ ပေးလာပါတယ်. နောက်ပီး Train House တွေလည်း ပုံစံ အသစ်နဲ့ မြင်တွေ့ ရမှာပါ. Download COC(12.10.2016).apk – 61 MB Download From Mediafire Download From PCloud Thz For Download . Min Oaker …
minokekar August 29, 2016	Uncategorised
Huawei Qualcomm CPU သုံးဖုန်းများနဲ့ HiSilicon CPU သုံးဖုန်းများအတွက် Board Firmware Collection https://www.mediafire.com/folder/e6cxxik2ba7hx/BoardFirmware Credit To: NgaLu
Iphone များအတွက် Jailbreak Pangu version အစုံ tool များ – Min Oaker
minokekar August 20, 2016	Uncategorised
Pangu iOS9Download Links: Jailbreak iOS 9.3.3 / 9.3.2 / 9.3.1 / 9.2commende (red) IPA File | Chinese Windows-only app: Link | Cydia Impactor: Mac OS X, Windows Jailbreak iOS 9.3.3 / 9.3.2 / 9.3.1 – 9.2: (not recommended) IPA File | Chinese Windows-only app: Link | Cydia Impactor: Mac OS X, Windows Jailbreak iOS 9.3.3/9.3.2/9.3.1/9.2 Updated: (recommended) Pangu Version: Windows (Mirror) / Mac …
Xiaomi MIUI 8 Gapps Installer (31.3) MB
minokekar August 6, 2016	Uncategorised
Xiaomi ဖုန်းတွေအတွက် မနေ့တနေ့ကမှ အသစ်ထွက်လာတဲ့ MIUI 8 အတွက် Google Application သွင်းလို့ ရနုိုင်မယ့် apk လေးတွေပါ ကွန်ပျူတာမလိုပါဘူး. ဖုန်းမှာ internet လေးပဲ ဖွင့်ထားပေးပါ. ကျနော် MIUI 8 မှာ စမ်းထားပီးပါပီ. အဆင်ပြေပါတယ်. Download MIUI 8 Gapps installer (31) MB http://sh.st/ZQFb6 Rarr Pass ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း – minoaker ပါ အဆင်ပြေပါစေ.. www.minokekar.net
Rooting Samsung Galaxy S5 (SM-G900H)& Stopped on Logo Fix 100% Tested
Samsung Galaxy S5 (G900H) တွေ တော်တော်များမျာ.း CF auto root နဲ့ root ဖောက်လိုက်ရင် Logo ရပ်သွားတတ်ကြပါတယ်. အဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ သာမန် Service သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ Firmware ပြန်တင်ဖို့ပဲ စဉ်းစားကြတော့တာပေါ့ တကယ်တော့ မလိုပါဘူး. ကျနော်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ပီးသားပါ. Recovery လဲပေးလိုက်ရုံနဲ့ logo ပြန်တက်လာပါ့လိမ့်မယ်. အောက်မှာ recovery ဖိုင်ပါ ပါတဲ့အပြင် တစ်လက်စတည်း CWM ကနေ တစ်ခါတည်း root zip ကို install လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ rooot တန်းပေါက်ပါတယ်. ဘာ error မှ မရှီပါဘူး စိတ်ချလက်ချနဲ့သာ …
Dowload Red Mi Note3(mtk) Finger Print Error Fix File (MT6795)
minokekar July 22, 2016	Uncategorised
Xiaomi ဖုန်းတွေထဲက Red Mi Note3(ရိုးရိုး) MTK ဖုန်းတွေပါတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ Firmware တင်ပီးလို့ Finger Print အလုပ်မလုပ်တော့ရင် ဒီကောင်းလေးနဲ့ ပြန်ပီး Flash ပေးပါ.. စမ်းသပ်ပီးသားပါ.. Dowload Red Mi Note3(mtk) Finger Print Error Fix File Size = 18 MB DOWNLOAD အဆင်ပြေပါစေဗျာ.. Min Oaker (Min Oke Kar)